उपचार गराउदा चम्सुरी घर बेच्ने अवस्थामा आइन्,लामो समय भयो पानि नपिएको(भिडियो हेर्नुस्) – News Online
उपचार गराउदा चम्सुरी घर बेच्ने अवस्थामा आइन्,लामो समय भयो पानि नपिएको(भिडियो हेर्नुस्)
नेपाली हास्यब्यङ्ग्य कलाकारिताको क्षेत्रमा एउटा जल्दोबल्दो नाम हो पल्पसा डङ्गोल । तपाइहरु कतिलाइ त थाहा पनि नहुन न सक्छ कि यो नाम चर्चित हास्यब्यङ्ग्य टेलिशृन्खला “मेरि बास्सै” बाट उदाएकी चम्सुरिको हो । त्यसो त पल्पसा अहिले चम्सुरी उपनामले बढि चिनिन्छिन १६ बर्षदेखि मेरि बास्सैमा अभिनय गरेर सबैलाइ हसाउने उनको जिबनमा अहिले निकै ठूलो दु’ख आइपरेको छ ।
पल्पसा बिगत केही महिनादेखी मिर्गौला रो’गका कारण उपचाररत छ्न । उनका दुइवटै मिर्गौला फे’ल भएका छ्न र हाल उनको डायलासिस भैरहेको छ । मिर्गौला प्र”त्यारोपण गर्नुपर्ने भएको छ उनको तैपनी यस्तो अबस्थामा पनि उनले मेरि बास्सैमा अभिनय गर्न भने छाडेकी छैनन । यसैक्रममा आज उनी ग्लामर गफ नामक प्रकाश सुबेदिको कार्यक्रममा आएकी छिन । के छन त उनका सु’खदुः’खका कुरा ?
अहिले आफ्नो अबस्था राम्रै रहेको र निरन्तर डा’य’लासिस गरिरहेको बताउछिन उनि । अनेक क’ठि’ना’ईका बाबजुद पनि उनले मेरि बास्सैमा अभिनय गरेको बताउछिन । उनले मृ’गौ’ला प्रत्यारोपण भने माघ महिना हुने कुरा बताइन तर सरकारि कामकाज नसकिएकोले मृ’गौ”ला डोनरको नाम खुलाउन चाहिनन । मृगौला दिने ब्यक्ति परिवारबाट नै भएको कुरा भने उनले खुलाइन । मृगौला दिने मान्छेको पुरै चेकजाच हुने भएकोले केही समय लागेको बताइन ।
कुनै समय उनको उपचारको लागी धेरै भन्दा धेरै सहयोग जुटेकोमा उनले त्यो सबै सहयोग रकम इन्कार गरेकीथिइन तर अहिले भने उनी नै पैसाको कमि भएको भन्दै सहयोग मा”गीरहेकी छिन । उनको चाहना भनेको कुनै एक संस्थाले एकमुष्ट सहयोग गरिदिओस र जनताको एक हजार दुई हजार बटुल्नु नपरोस भनिन । यस्तो क्रियाकलापले कलाकारले भि”ख मा”गेजस्तो हुने उनको भनाइ रहेको छ । आफ्नो घरजग्गा पनि बेच्न तयार छिन उनी ।
औषधि खादा एक घुट्की पिएको पानी पनि पछि निकालिने बताइन उनले । यसरी पानी निकाल्दा निकै गा’ह्रो हुने कुरा पनि उनले खुलाइन । पानी खान निकै रहर लाग्ने तर दु”खाइ सम्झिदा खान मन नलाग्ने बताइन उनले । अ’प्रे’स’न सक्किनासाथ पानी पिउने बताउछिन उनि, क’ठै उनि ।
बाकी हेर्नुस तलको भिडियोमा :-
Published November 29, 2021 By टक नेपाल संवाददाता
सिन्धुपाल्चोकबाट १९ वर्षे करिना बनिन् कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि
कठै ! बिचरा सानै मा आमा बुबा गुमाएकी बिमला परिवारको कथा सुन्दा मनै रुवाउने हेर्नुस् भिडियो सहित ।।